ဈေးတန်ပြီးအရသာကောင်းလွန်းလို့ လတ်တလောရေပန်းစားနေတဲ့ ကိုရီးယားစားသောက်ဆိုင် – FoodiesNavi
By yin sandi On December 17, 2018 0
ချိုစပ်စပ်နဲ့ခံတွင်းနဲ့အစပ်အဟပ်တည့်လှတဲ့ ကိုရီးယားအစားအစာတွေကိုမှ ရင်ခုန်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ အခုတလောရေပန်းစားနေတဲ့ ကိုရီးယားစားသောက်ဆိုင် အကြောင်းဖောက်သည်ချပေးမယ်နော်။ ဆိုင်နာမည်လေးကတော့”Bomnal” ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလောက်ကမှ စဖွင့်တာဆိုပေမယ့် အစားတစ်လိုင်းတွေကြားထဲမှာ တော်တော်လူပြောများနေတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ ကိုရီးယားမီနူးစုံစုံလင်လင်ကို ဈေးတန်တန်လေးနဲ့စားနိုင်မယ့် ဆိုင်လေးဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော် ။
Bomnal မှာမင်မင်အကြွေဆုံးကတော့ ရေဘဝဲချဉ်စပ်ချက်လေး ? တစ်ပွဲကို(၄)ထောင်ပေးရပေမယ့် မြင်မြင်ချင်းဆွဲစားချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုတွေပြည့်နေတာနဲ့တင် တန်တယ်ရယ် ? ရေဘဝဲလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးတွေကို ကိုရီးယားဆော့စ်အနှစ်ကလေးတွေနဲ့ ချိုစပ်အရသာလေးတွေစိမ့်ဝင်နေအောင် ချက်ထားတော့ စားရတာအရသာထိထိမိမိနဲ့ ရှယ်ခံတွင်းတွေ့ချက်ပဲ ? ဆလပ်ရွက်လေးတွေထဲထုပ်ပြီး တမြေ့မြေ့ဝါးလိုက်ရင် ပိုလို့ကောင်းသေး ?
မင်မင်မှာစားဖြစ်တဲ့အထဲ နောက်ထပ်သဘောကျမိတာလေးကတော့ ပင်လယ်စာပန်ကိတ် ? ကိုရီးယားစားသောက်ဆိုင်တွေရောက်တိုင်း အမြဲစားနေကျစားစရာလေးမို့ တစ်ဖဲ့လောက်မြည်းကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ကို နူးညံ့အိစက်တဲ့မုန့်သားတွေနဲ့အတူ အရသာဆိမ့်ဆိမ့်လေးဆိုတော့ စားလို့ကောင်းချက်ပဲ။ ပင်လယ်စာတွေပန်ကိတ်သားထဲမြုပ်နေပေမယ့် အရသာတွေကတော့ စုပြုံပေါင်းစုပြီး ခံစားလိုက်ရသလိုပဲ။ တစ်ပွဲကို(၂၅၀၀)နဲ့ အကြီးကြီးပါတော့ ဗိုက်ကားနေရောပဲ။
ကျောက်အိုးပူထမင်းသုပ်ကတော့ တခြားဆိုင်တွေလောက်မကောင်းဘူးရယ်။ အပြင်အဆင်ဒီဇိုင်းတွေတူပေမယ့် အရသာထိမိမှုသိပ်မရှိလှဘူးရယ်။ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်နဲ့အရသာရဲ့ထိရှအားနည်းတယ်။ ထည့်ထားတဲ့အရွက်အသီးတွေကတော့ အတော်လေးလတ်ဆတ်တယ်။ တစ်ပွဲကို(၃၅၀၀)ကျပ်နဲ့ပေးရလောက်အောင်တော့ အရသာမထူးခြားဘူးလို့ထင်တယ်။
ကင်ချီဟင်းရည်လေးကတော့ အရသာတော်တော်လေးပေါ်လွင်တယ်။ ချိုအီတဲ့အစားအစာတွေစားပြီးနောက် အအီပြေပြီးခံတွင်းရှင်းသွားစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ ခံတွင်းနဲ့လိုက်ဖက်ကောင်းမွန်လှတဲ့ ဟင်းရည်လေးပါပဲ။ အရသာက အရမ်းကြီးချဉ်မနေဘဲ ချိုချဉ်ငံစပ်အရသာတွေထုံလွှမ်းပြီး သောက်လို့ကောင်းချက်ပဲ။ ဒီဟင်းရည်လေးကလည်း (၃၅၀၀)ကျပ်ပဲ။
Chilli Prawn ကတော့ (၅၀၀၀)ကျပ် ၊ ပုဇွန်ထုပ်အလတ်ဆိုဒ်လေးတွေကို မုန့်နှစ်နဲ့ကပ်ကျော်ပြီးမှ ကိုရီးယားဆော့စ်အနှစ်လေးတွေနဲ့ ရောချက်ထားတော့ ပုဇွန်အသားတွင်းကြားထဲထိ ဆော့စ်အရသာတွေစိမ့်ဝင်နေပြီး မြူးမြူးတူးတူးနဲ့စားလို့ကောင်းချက်ပဲရယ်။ ပုဇွန်အသားတွေက တင်းတင်းအိအိလေးနဲ့ဆိုတော့ တစ်ထုတ်ထုတ်လေးနဲ့ ဝါးလို့ကောင်း စားလို့ကောင်း။
Spicy Noodle ကတော့ အရမ်းကြီးမဖိုင်းဘူးရယ်။ စားနေကျခေါက်ဆွဲသား စီးစီးတုတ်တုတ်လေးတွေမဟုတ်ဘဲ အမျှင်သေးသေးလေးနဲ့ရှမ်းခေါက်ဆွဲလိုအဖတ်တွေဆိုတော့ အရသာသိပ်မဝင်သလိုပဲရယ်။ ခေါက်ဆွဲအရသာကလည်း spicy ပေမယ့် အစပ်အရသာသိပ်မထူးကဲဘဲ အရသာနည်းနည်းပေါ့သလိုခံစားရတယ်။ ဈေးနှုန်း(၃၀၀၀)နဲ့တော့ အရမ်းကြီးတန်ကောင်းတဲ့အထဲမပါဘူး။
အကုန်ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ရေဘဝဲချဉ်စပ်ချက် ၊ Chilli prawn တွေကတော့ Bomnal မှာ လုံးဝသွားစားကြည့်သင့်တဲ့ မီနူးလေးတွေပါနော်။ ဒီဆိုင်မှာသဘောကျမိတာက ဘာပဲမှာစားစား မုန်ညှင်းဂာင်ချီ ၊ ငါးနီတူခြောက်လေးတွေနဲ့ ဟင်းရည်လေးတွေချပေးတယ်။ ဖရဲသီးလည်းအချိုတည်းဖို့အလကားကျွေးသေးတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုကလည်း လိုလေသေးမရှိဘူးဆိုတော့ တော်တော်လေးကြိုက်မိတယ်ရယ်။ ဆိုင်အပြင်ဆင်လေးကလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလေးဆိုတော့ အစားတစ်လိုင်းတွေ သဘောကျမိမှာ အသေအချာပါပဲနော်။ Bomnal ဆိုင်လေးကို စိတ်ဝင်စားလို့သွားစားချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဆိုင်လိပ်စာကတော့ တာမွေမြို့နယ် ၊ သတိပဌာန်လမ်းမပေါ် ၊ ကျော်မြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
In Reviews Tagged korean foods Leaveacomment
စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲပြီး ဝိတ်ချချင်သူများအတွက် တစ်နေ့တစ်မျိုး ဟင်းအမယ်တိုးစေဖို့….
ချဉ်ငံစပ်အရသာတွေပေါက်ထွက်လာမယ့် ပဲပြားအစာသွတ်လေး လုပ်စားကြမယ်